अरु खबर - deshparadesh |सीप, समृद्धि र सुरक्षित बैदेशिक रोजगारीका लागि
विविसीको हेराईमा नेपालीले मन नपाउने भारतका ८ कुरा
भारत र नेपालको जस्तो सम्वन्ध विश्वका कमै देशबीचमा देख्न पाइन्छ । दुवै देशबीच लामो खुल्ला सिमाना छ, धार्मिक, ऐतिहासिक, साँस्कृतिक तथा राजनीतिक रुपमा यी दुई देशबीच धेरै कुरा समान छन् । तर यतिले मात्र सम्वन्ध राम्रो हुन्छ भन्ने छैन । दुई देशबीच समय समयमा तनाव पनि हुने गरेको छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा नयाँ संविधान जारी भएपछिको तनाव अझै सहज भइसकेको छैन ।
यहि सन्दर्भमा बिबिसीले नेपाल
हिन्दी फिल्म 'बारबार देखो' भन्दा नेपाली फिल्म '६क्का पञ्जा'ले तान्यो दर्शक
काठमाडौं - प्रदर्शनको दोस्रो दिनमा फिल्म ‘६क्का पञ्जा’ले उल्लेख्य व्यापार गर्नुका साथै राजधानीका केही हलहरुमा नयाँ रेकर्डसमेत तय गरेको छ। करिब ८० हलहरुबाट प्रदर्शनमा आएको फिल्म शनिबार देशभरका लगभग सबै हलमा हाउसफुल भएको वितरक गोपालकाजी कायस्थको दाबी छ।
राजधानीका गोपीकृष्ण र अष्टनारायण हलमा दीपाश्री निरौला डेब्यु निर्देशित ६क्का पञ्जाले पछिल्लो समय ‘हिट’ भएका नेपाली फिल्महरुको तुलनामा नयाँ रेकर्ड बन
मधेसी मोर्चाले शहीदको संख्या ६ जना बढायो, सूचीमा भारतीय पनि, साढे ६ सयको उपचार खर्च माग
काठमाडौं, साउन ३१- मधेस आन्दोलनको क्षति सम्बोधनमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार उदार हुने संकेत पाएपछि मधेसकेन्द्रित दल एकपछि अर्को माग थप्न थालेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धन संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई जसरी पनि मनाउने मनस्थितिमा रहेको चाल पाएसँगै मोर्चाले मागसूची लम्ब्याएको हो।
अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारलाई मधेस आन्दोलनमा ४२ जनाले ज्यान गुमाएको
लागु औषध सेवन गरेको भन्दै बाँदरलाई देश निकाला !
हरि कृष्ण न्यौपाने, कुवेत
लागूऔषध दुर्व्यासनिका लागि निषेध गरिएको कुवेतमा लागूऔषध बिक्री बितरण र प्रयोग गर्ने दुबैलाई बिगो हेरी हदैसम्मको दण्डजरिवाना र कारबाही हुँदै आएको छ। यसै बिच कुवेतमा केही दिन पहिले मात्र बाँदर धनीका साथ बाँदर पनि लागूऔषध दुर्व्यसानिमा फसेको र मातिएको अवस्थामा भेटिएकोले बाँदरलाई उसकै देश इण्डोनेशिया देश निकाला (डिपोर्ट) गरिने भएको छ।
कुवेतको चर्चित पत्रीका अलराइलाई उधृत गर
आत्महत्याबाट कसरी जोगिने ?
जानीजानी, आफुखुशी अर्थात कसैको दबाबमा नपरी आफ्नो जीवनको अन्त्य गर्नुलाई आत्महत्या भनिन्छ । ‘आत्महत्या’ शब्दले आत्माको हत्या जनाउँछ । तर ‘आत्मा’ को हत्या गर्न सम्भव छैन । स्वयंले गरेको शरीर हत्यालाई नै आत्महत्या भन्ने गरिन्छ । पछिल्लो समयमा बैदेशिक रोजगारीमा आत्महत्या एउटा चिन्ताको विषयका रुपमा अगाडी आएको छ । हृदयाघात, दुर्घटनापछि आत्महत्या नेपाली कामदारको मृत्युको कारण देखिएको छ
अव अरुलाई यस्तो नहोस्
एउटा उसलाई, एउटा मलाई १ सन्तानका लागि सारा दिन सक्ने आमाले अठोट गरिन्, ‘मेरो छोरालाई मै मृगौला दिन्छु।’ अस्पताल गइन्। डाक्टरले भने, ‘तपाईंको मृगौला उसलाई मिल्छ, मिल्दैन जाँच्न मात्रै १ लाख २० हजार रुपैयाँ लाग्छ।’
अब भने उनी खङ्ग्रङ्ग भइन्। किनकि, उनीसँग छोरालाई दिने मृगौला थियो, आफ्नो शरीरबाट उसकहाँ सार्ने पैसा थिएन।
त्यसमाथि जाँच्नै त्यत्रो लाग्ने १ उनी निराश भएर फर्किइन्। पैसा
अभिनेता श्रीकृष्णको निधन भएको दुई बर्ष, स्वेताले किन सम्झिइनन् उनलाई ?
काठमाडौं- अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठको स्वर्गारोहण भएको आज दुई वर्ष पूरा भएको छ । वि.स २०७१ साल साउन २४ गते अभिनेता श्रेष्ठको भारतस्थित दिल्लीको गंगाराम अस्पतालमा निधन भएको थियो । सोही भोलिपल्ट उनको निर्माण तथा अभिनय रहेको फिल्म ‘कोेहिनूर’ प्रदर्शनमा आएको थियो, जुन फिल्मले अध्याधिक दर्शकको साथ पायो ।
स्व. अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठको दोश्रो वार्षिक पुण्य तिथिलाई केही फिल्मकर्मीले सम्झिएका छन् । जस
कसरी गैरकानूनी रुपमा छिर्छन् अमेरिका ?
२०७० साल असार १३ गते बिहीबार । बौद्ध स्तूपा पछाडिको पुरानो घरको टिनको छाना असारे झरीले चुटिरहेको थियो । भुइँतल्लामा सुतेका ताप्लेजुङ पापुङका प्रेम निदाउन सकेका थिएनन् । दुःख, सुख गरेर जीवन बिताइरहेका उनलाई अमेरिका जाने भूत सवार भएको महिनौं बितिसकेको थियो । सँगैका साथी गाउँमा धान रोप्न धमाधम भइरहेका बेला उनी भने अमेरिकी सपनामात्रै देखिरहेका थिए । सपनासँगै निदाएका प्रेम अर्को दिन गैरकानुनी रूपमा लु
विदेशमा हुनुहुन्छ ? यसरी जोगिनुस् डिप्रेसनबाट
हङकङमा अवशर खोज्दै नेपाली
फेसबुकमा अव ४४ भाषामा लेख्न सकिने
फेसबुकबाट फसाएर किशोरीलाई बेच्न लैजाने पक्राउ
क्यान्डी क्रसको लतले फसाउला है
विदेशी कामदारको भर नपरः मलेसियन ट्रेड युनियन
जागिर सुरु गर्नु अघि अर्को परिक्षा दिनुपर्ने
फेसबुक र भाइवरबाट ठग्दै युवती
यौन सम्पर्क राखेको पैसा नपाएपछि बलात्कारको अभियोग लगाई प्रहरी खोरमा
कसरी रहने खुशी र सुखी
हरिवंशलाई सम्झंदै हाँस उठ्ने ७ कुरा
भारतमा २३ लाखले आवेदन दिएपछि विज्ञापन नै रद्ध गरियो
'म उनलाई जीवनभर कुर्न तयार छु'
पौने दुई अर्व रकम लिने आएनन्
तस्वीरमा हेर्नुहोस् कतारमा फिलिपिन्स विरुद्ध भएको नेपालको फुटवल